European Isi Site Train Na 3 izu | Save A Train
Home > Travel Europe > European Isi Site Train Na 3 izu
European Isi Site Train Na 3 izu
Train Travel Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Holland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 30/04/2021)
A quintessential njem na njem bụ njem na Europe ụgbọ okporo ígwè. Ọ na-ngwa-ngwa-aghọ ihe ka mma eco-enyi na enyi njem usoro. Travel, na kachasi mkpa, ọ bụghị nanị na sakwuo mbara anyị horizons ma sakwuo mbara anyị n'ọnọdụ. Chee echiche nke St. Augustine ọtụtụ okwu, "Ụwa bụ a akwụkwọ na ndị na-eme bụghị njem, gụrụ nanị otu page ".
Na nke a tech-savvy, digital age connection is fast and furious. Na niile nke uru ya, anyị na-ejighi njikọ na akụkụ kasị mkpa nke na-eme njem na ndụ, ugbu oge. Train Njem site na Europe na-akpali, na-ala na ihunanya.
N'ihi na ndị anyị na-adịghị ebi ndụ a mba ebe ụgbọ okporo ígwè eme njem bụ ndị a ma ama, ọ pụrụ ịbụ a omimi njem. Ọzọ dị ukwuu perk nke European ụgbọ okporo ígwè eme njem bụ na, n'adịghị ọdụ ụgbọelu, European n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na-emi odude nri n'etiti obodo. Ọ egbupu-enweghị isi na-akwụ ụgwọ anyị finely ekiri njem Amawaputala.
Site na nkweta a ụgbọ okporo ígwè site na Europe, anyị na-ahọrọ a n'aka nke njem na-agaghị na-arụ anyị ma ka anyị hụ ihe karịa anyị na-emekarị ga-. Otu onye dị otú nsochi usoro emepe iri na abụọ isi European ẹkenemede na na-eme na ihe 3 izu. Gụọ na chọpụta otú njem European Isi Site Train Na 3 izu.
European Isi Site Train Day 1: Vienna, Austria
The ụgbọ okporo ígwè site na Europe njem amalite Vienna, bụ isi obodo nke Austria. Abụọ dị ebube ụbọchị nke njem echere. Baroque streetscapes na alaeze ukwu obí eze ahụ doziri ka ngosi nka, ụkpụrụ ụlọ, omenala, na ọmarịcha egwu. Nke a bụ n'akụkụ ya nweere ya anyaụfụ kọfị-ụlọ na omenala na vibrant imewe Mpaghara.
mumok na-a kwesịrị-eme mgbe na Vienna. Ọ mara maka ya avant-garde na mgbe ụfọdụ-awụ akpata oyi nkà kere, nke na-agụnye ọrụ site Pablo Picasso na Andy Warhol. The collection ya nile mejupụtara ihe fọrọ nke nta 10,000 nkà utọ.
Ụgbọ oloko gị site Europe na-aga n'ihu, okodu a ụbọchị na Austria si Salzburg obodo. Ọ bụ na ókè-ala nke Germany na nwere ikpọ echiche nke Eastern Alps. Salzburg si kwuru na ama a na a akụkọ-akwụkwọ n'obodo bụ otu ugboro n'ụlọ ụwa kasị ukwuu dere, Mozart.
Ugwu nta dị ndụ na Salzburg. Ọ na-e ugboro ji dị ka filming ọnọdụ maka ukwuu acclaimed, “Ofda Music” na e nwere palpable uche nke nkà e kere eke. Ọ na-exudes a jụụ n'ịdị jụụ.
European Isi Days 3: Munich, Germany
Abụọ na-esonụ na-akwụsị a ụgbọ okporo ígwè site na Europe bụ Munich na Stuttgart na Germany. Ọ ga-abụ ihe kasị mma na-eji a ụbọchị nke ọ bụla n'ime ndị a ma ama na ebe.
Munich na ihe nketa Bavaria bụ ebe biya na ọdịna ime biya amalitela akụkụ dị mkpa nke ọdịnala ha, fọrọ nke nta ka narị afọ asaa. The Oktoberfest bụ na n'elu ndepụta na Munich. Ọ na-eme ememe site na ọtụtụ nde mmadụ na nleta si n'akụkụ nile nke ụwa, na-eri na-eme ihe n'ememe.
Day 4: Stuttgart, Germany
Stuttgart nwere ihe mara mma obi na-adị, ebe ngwa ngwa ụgbọala na fancy ụlọ oriri na ọṅụṅụ ịmepụta otu ambiance nke oge a ndụ ma e nwere ihe ọzọ ka Stuttgart karịa nnọọ oge a. Stuttgart nwere wine ụlọ na obi-nut shaded biya ubi na-egosi a tọrọ-azụ, igba ụkwụ gị isi.
Nuremberg na Stuttgart Ụgbọ oloko
Munich na Stuttgart Ụgbọ oloko
Frankfurt ka Stuttgart
Heidelberg na Stuttgart Ụgbọ oloko
European Isi Days 5: Strasbourg, France
Hopping azụ n'ụgbọ okporo ígwè, ọ bụ anya ka France! Wepụta a ụbọchị na Strasbourg.
Strasbourg anaghị ekwe n'etiti a n'oge ochie na a nwayọọ nwayọọ na-eme n'ọdịnihu. Ya Gothic Cathedral bụ ihe ụkpụrụ ụlọ ijuanya and roaming through the old town’s twisting alleys and enjoying tavern food comes highly recommended.
Dijon na Strasbourg Ụgbọ oloko
Days 6 – 8: Paris, France
Paris kwesịrị obere iwebata ya iconic ije gụnyere eiffel tower, na Arc de Triomphe, na Notre Dame Cathedral. The okwu ndị Paris bụ otu style na ezi ihe kpatara. na-atụ anya ụwa-klas nri, shopping, na veranda nke bụ a na-agwụcha isi iyi nke n'ike mmụọ nsọ na ụtọ. The kasị mma ụgbọ okporo ígwè njem Europe ga-agụnye a ma ama obodo.
European Isi Days 9 & 10: Brussels, Belgium
Ozugbo Paris wooed na romance, emefu esote ụbọchị abụọ Brussels, tupu ọzọ ụgbọ okporo ụkwụ. Ụbọchị abụọ Brussels ga-iso nke Art Deco facades na ịga Grand Obí square. Ọ na-emi odude ke esịt nke obodo, ebe 17nke na narị afọ gara aga na-abịa ndụ.
Days 11 – 13: Amsterdam, Mba netherland
Amsterdam bụ ebe ụgbọ tinyere akụkọ ihe mere eme ọwa mmiri, nke bụ ihe zuru ebe nile, na mkpagharị site ngosi ihe mgbe ochie na Devid agụghị ndị gbara-jupụta ụlọ ahịa. mmanya, na-eri nri, na imewe ihe nkiri na-atọ ụtọ ma na-atụrụ ndụ. Amsterdam bụ obodo nke na anya na bụ n'ụlọ ka ndị Van Gogh ngosi nka nakwa dị ka a kpọrọ ndị ọzọ akụ na ngosi.
European Isi Days 14 – 17: Bremen & Berlin, Germany
Head azụ Germany na-anọ ụbọchị ise na ụgbọ okporo ígwè site na Europe na Bremen, Berlin, na Dresden. Otu ụbọchị maka Bremen (na foto dị n'okpuru), eleta ya ọtụtụ ngosi ihe mgbe ochie na veranda dị ka Bremen Overseas Museum. Ọ bụ a n'ọdụ ụgbọ mmiri n'obodo, Bremerhaven bụ ebe na-enwe ọhụrụ Erimeri na-amụta banyere a na-adọrọ mmasị ọdụ ụgbọ mmiri akụkọ ihe mere eme.
Berlin ga-mkpa ụbọchị atọ nke nmikpu. Berlin nwere aha ọma maka ịbụ “obodo nke na-ehi ụra”. -Uru nke ya vibrancy! Ehihie na abalị bụ maka oriri oké mkpọtụ na ụbọchị ndị maka omenala nchụso.
Leipzig na Berlin Ụgbọ oloko
Day 18: Dresden, Germany
Dresden oyomde na a ụbọchị, ịtụnanya dị ka ya Grand Dome na ya Versailles-sitere n'ike mmụọ nsọ Zwinger n'obí ụlọ ngosi ihe mgbe ochie. The obodo e guzobere 1743 na a ga-ewughachi mgbe Agha Ụwa 2. Ọ gùrù 'Florence nke Elbe’ ekele ya idyllic ebe.
Berlin na Dresden Ụgbọ oloko
Hanover na Dresden Ụgbọ oloko
Potsdam na Dresden Ụgbọ oloko
Nuremberg na Dresden Ụgbọ oloko
European Isi Days 19 – 21: Prague, Czech Republic
The ụgbọ okporo ígwè eme njem na Europe agwụ na Prague, mgbe a oké ifufe nke na-eche. Prague bụ obodo nke spiers na a na-tụnyere ndị ịma mma nke Paris. Ọ na-na-kọwara ya dị ka n'ụlọ Europe ji mma biya. Enwe ịhụ ndị a 14nke na narị afọ nkume akwa, ulo ugwu, na osimiri di ume-ngwu. Ọ bụ n'ụzọ zuru okè na-akwụsị a ụgbọ okporo ígwè njem site Europe.
The kasị mma ụgbọ okporo ígwè njem Europe ga-eme ka ị na-ọma na zuru. Ghọta na ebe ndị mara mma n'ụzọ, nchekwa nke njem ụgbọ oloko, na ịpịkọta ihe dị ka o kwere mee. E nweghị ụzọ ka mma isi njem. Book na Save A Train taa!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “European Isi Site Train Na 3 izu” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropean-highlights-by-train%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / tr aka / de ma ọ bụ / es na ndị ọzọ asụsụ.